Vector dia novatsiam-bola tamin'ny taona 2004. Mifantoka amin'ny vokatra automatique indostrialy miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina, dia afaka manompo mpamokatra fitaovana avo lenta izahay ary manome vahaolana ankapobeny ho an'ny mpanjifa amin'ny sehatry ny tsena.
Ho tonga mpamatsy laza lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ny vokatra sy vahaolana amin'ny automatisation indostrialy. Ny vokatra novolavolaina tsy miankina dia misy ny servo drive, ny mihetsika mihetsika, ny masinin'olombelona, ​​ny motera servo, sns.
1. Servo drive & Servo motors - Ny elanelan'ny herinaratra dia manarona 0.2KW-110KW. Ary rafitra servo natokana ho an'ny fifehezana ny fihenjanana, antsy Rotary, antsy manenjika, fanapahana maty tsy miankina;
2. Motion Controlleur- VA & VE modely mpanara-maso, mifantoka amin'ny karazana fanaraha-maso ny fitaovana indostrialy (Fanontana sy famonosana, fanamboarana, plastika, CNC, sns.);
3. Miaraka amin'ny patanty famoronana maromaro, ny patanty modely ho an'ny fampiasana ary ny zon'ny fisoratana anarana amin'ny lozisialy, dia orinasa teknolojia avo lenta.
Manana ny foibem-pikarohana sy ny fampandrosoana ary ny toha-pamokarana, ao amin'ny firenena dia manana birao sy maso ivoho maromaro.
Ny fifaninanana ifotony dia ny hahatratra ny fampidirana tsy tapaka ny vokatra R&D sy ny fampiharana ny vokatra ary ny fanomezana vahaolana momba ny rafitra matihanina sy mahomby.
Vector dia hanohy hifikitra amin'ny filozofian'ny orinasa "mamorona lanja amin'ny mpanjifa amin'ny fo manontolo" manao ezaka lalina eo amin'ny sehatry ny automatisation indostrialy, ary mamorona ny hatsaran'ny fanaraha-maso ny hetsika dia ny fikatsahana tsy an-kijanona, tapa-kevitra ny hanangana marika nasionaly miaraka amin'ny teknolojia mitarika, mahomby fitantanana, mitarika laza malaza eto an-toerana sy iraisam-pirenena.
Sarobidy fototra - Mifantoha amin'ny sanda, mahatratra ny mpanjifanay
Ny làlan'ny fampandrosoana
2021 Manomboka ny asa any ivelany.
2018Naseho ny mpanera mihetsika karazana fiara fitateram-bahoaka EtherCAT miorina amin'ny PC.
2017Mifindra any amin'ny Centre R&D District Songshanhu.
2016Vidio ny ivon-toerana R&D Distrika Songshanhu.
2014Manangana tetik'asa hamolavola mpanara-maso; mifantoha amin'ny fifehezana ny fihenjanana ary manome vahaolana fitaovana aorian'ny gazety.
2012Mifantoha amin'ny fifehezana synchronous, fanaraha-maso loop loop; mpanara-maso mihetsika mialoha ny fikarohana.
2010Manome vahaolana ho an'ny fitaovana fanodinana vy; lasa orinasa teknolojia avo lenta.
2008Mifantoha amin'ny fanaraha-maso ny hetsi-panoherana fanenjehana elektronika tafiditra ao anaty servo drive VEC-VBF; Mifantoha amin'ny vahaolana amin'ny fitaovana ho an'ny indostrian'ny fonosana.
2006Nanambola tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny servo drive universal; napetraka teny an-tsena ny servo servisy VEC-VBH; mifantoka amin'ny fifehezana cam cam elektronika tafiditra ao anaty servo drive VEC-VBR.
2004Niorina tao Shenzhen ary namolavola ny inverter andiany VEC-V5; ny vokatra inverter dia omena an'i Pepsi, Kingway Beer ary orinasa hafa.
1. Miaraka amin'ny Patentintsika manokana
2. Mifantoha amin'ny fanaraha-maso mihetsika napetraka nandritra ny 17 taona mahery, OEM & ODM
3. CE, ROHS ho an'ny tsena rehetra
4. Fitsapana in-4 alohan'ny fanaterana
5. Warranty 24 volana
6. Omeo fanampiana ara-teknika
7. Ekipa R&D matihanina